IZAKHAMUZI ZINXUSWA UKUTHI ZIGWEME UKUXHUMA UGESI WEZINYOKA – The Olifants News
HomeCOMMUNITYIZAKHAMUZI ZINXUSWA UKUTHI ZIGWEME UKUXHUMA UGESI WEZINYOKA
UMsipala weDolobha lase Ekurhuleni ukhiphe isicelo emphakathini wase Ekurhuleni mayelana nogesi oxhunywe ngokungemthetho.
“Kubekhona izigameko zokunqamuka kukagesi kumasipala weDolobha, ngenxa yogesi oxhunywe ngokungemthetho.
Ezindaweni ezikhungethwe yilenkinga kuvele ukuthi zinabantu abangu 63% abangawukhokheli ugesi. Lokhu kuvele kwathena amandla kagesi amandla, ikakhulukazi njengoba kusebusika,” kusho umbiko.
“Ezindaweni eziningi eziyimijondolo ikakhulukazi eziseThembisa, abantu bawufake ngenkani ugesi,” kusho uThapelo oyisakhamuzi sase- Winnie Mandela.
“Ukuxhuma izinyoka kubeka izingane zethu engcupheni yokulinyazwa wugesi,” kuqhubeka uThapelo.
Imiphakathi ethintekile ixuswa ukuthi ibambisane nomasipala ekuvezeni izigilamkhuba ezibandakanyeka ekuxhumeni ugesi ngokungemthetho. Ukusindwa kwe-network kwenzeka uma abantu abaningi besebenzisa ugesi odalelwe umndeni owodwa. Ama-circuit breakers afakiwe avamise ukuwa lapho ibhokisi likagesi lisindwa kakhulu.
Ngokumapasila, uma ugesi uxhunywe ngokungemthetho, izintambo zivamiswe ukuxhunywa kuma-circuit breakers bese kunokuthi awe, avele aqhume kushe nemijondolo.
“Lokhu akuyona kuphela ingozi kodwa kuthatha amahora amaningi ukuthi kulungiswe. Izakhamizi namabhisinisi avamise ukuxhuma ugesi ngokungemthetho ngokuthi bembele izintambo phansi. Lokhu kukodwa kuyingozi ngoba kubeka izimpilo zabantu engcupheni,” kunxusa umapasila.
Amasu okuvikeleka kugesi
-Gwema ukukhipha ama-plugs ngokuthi udonse intambo. Lokhu kulimaza intambo kagesi futhi kwenza ukuthi isheshe iguge bese iqaquluke.
-Gwema ukuxhuma izintambo ezingavalekile kumasokhethi.
-Ungathinti amasokhethi ngezandla ezimanzi.
-Musa ukusebenzisa ugesi endlini yokugezela ngoba amanzi nogesi akuhlangani.
-Gwema ukudlulisela ugesi kwamanye amakamelo ngamawindi, noma ngeminyango ngoba izintambo zingahle zilimale.
-Musa ukufaka amapulaki amaningi endaweni eyodwa.
Uma izingane zidlala phandle, ziyale ukuthi zingadlaleli eceleni kwezintambo zikagesi, ikakhulukazi mayelana nalokhu:
-Zigweme ukudlala eduze namabhokisi kagesi.
-Zingadlali ngamakhayithi eduzane nezintambo zikagesi. Uma ikhayithi ingabhajwa entanjeni kagesi, zingazami ukuyikhipha ngoba zizolimala.
-Zigagibeli izihlahla ezibuqamama nezintambo zikagesi.
Izakhamizi zikhuthazwa ukuthi zibike ngokuxhunywa kukagesi ngokungemthetho ngokuthi zishayele lenombolo elandelayo 0860 543 000.